သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: သတိပြုနိုင်ရန်
မနေ့က ကျမတို့မြို့မှာ လူတစ်ယောက် laptop မီးလောင်လို့ မီးသတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း သူပါအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်။ ထိုသူက laptop ကို couch ပေါ်တင်ပြီး အားသွင်းထားတာ ခုံကပျော့တော့ လေ၀င်လေထွက်ပေါက်ကို ပိတ်ထားသလိုကလဲဖြစ်၊ ဘက်ထရီကလဲ ယိုယွင်းနေတဲ့ ဘက်ထရီကလဲဖြစ်တော့၊ မီးထလောင်တာလို့ ဆိုပါတယ်။ Hwelett-Packard က မေလတုန်းက notebook ဘက်ထရီပေါင်း ရသောင်းကို ပြန်ခေါ်ထားပါတယ်။ ကနေဒါမှ လူများကတော့ ဒီဆိုက်ဒ် မှာ ကိုယ့် notebook ဘက်ထရီ ပြန်ခေါ်စာရင်းထဲပါလား စစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဆန်ဆန်အဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်တဲ့အခါမှာ ဒဏ်ရာအနာတရ ရတာမျိုးလောက်ပဲ အရင်က ဖြစ်ကြပေမယ့် တစ်ခါတုန်းကတော့ အိမ်ပါ မီးလောင်သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Notebook တွေကို မာတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ သုံးရန်၊ ပျော့တဲ့မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာသုံးလျှင် အပူစုတ်ပြားခံပြီးသုံးရန်၊ အိတ်ထဲထည့်ပြီးသယ်သွားချိန်တွေမှာ စက်ကိုပိတ်ပြီးမှ သယ်သွားရန်၊ စက်ရဲ့လေ၀င်လေထွက်ပေါက်ကို ဖုန်တွေမပိတ်အောင် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရန်၊ စက်ရဲ့အပူချိန်တွေ လျော့ကျစေတဲ့ သင့်တော်ရာ စားပွဲ၊ မျက်နှာပြင်တို့ကို အသုံးပြုကြရန် စသဖြင့်အကြံပေးကြပါတယ်။
Notebook တွေကို ကုတင်ပေါ်တင်၊ ဆိုဖာပေါ်တင်ပြီး စာဖတ်တာတို့၊ စာဖတ်ရင်း၊ သီချင်းနားထောင်ရင်း အိပ်ပျော်သွားတာတို့ ကျမ ကိုယ်တိုင်လဲ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ဆိုဖာပျော့ပေါ်မှာ၊ အိပ်ရာထဲမှာ၊ ကျောင်းစာဖတ်ရင်း၊ ပရိုဂျက်လုပ်ရင်း Notebook ပွင့်ပြီး အိပ်ပျော်သွားလိုက်တာ မိုးလင်းသွားတတ်တာမျိုးတွေက အလွန်အန္တရာယ်ကြီးပါတယ်။ လေ၀င်လေထွက်ပေါက်ကို မပိတ်ရဘူး၊ မာတဲ့ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ တင်ထားရတယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိပေမယ့်၊ တစ်ခါတစ်ခါ သတိမမူ ဂူမမြင်၊ ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဖြစ်တတ်ကြလို့ ဒီပိုစ်လေးကို ရေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မမရေ.. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ ကျွန်မလဲ အိပ်ရာပေါ်မှာ ဂိမ်းဆော့ရင်း အိပ်အိပ်ပျော်သွားလို့
သတိထပ်ပေးတာကျေးဇူးပါပဲ။ ကြာခဲ့ပီတစ်ခေါက်ကြားဖူးပေမယ့် နောက်ပိုင်းပေါ့ပေါ့လေးနေမိတာ
Comment by စန္ဒကူး — August 27, 2009 @ 5:40 pm |Edit This
လပ်တော့အောက်ဘက်ကို တင်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်နဲ့မထိစေဘဲ လေထွက်ပေါက်ရှိအောင်အနည်းငယ်လွှတ်ထားပေးတာကောင်းပါတယ်..။ အောက်မှာခံထောက်ပေးတဲ့အလုံးလေးတွေလဲ ဒီမှာရောင်းသားပဲ..။ ပန်ကာနဲ့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့..။
Comment by Evergreen Phyo — August 27, 2009 @ 8:48 pm |Edit This
Comment by ဒေါင်းမင်း — August 27, 2009 @ 10:09 pm |Edit This
မမအိမ့်ရေ…………. ရည်မွန်လဲ လာတယ်…. နေကောင်းတယ်ဟုတ်…
Comment by ရည်မွန် — August 27, 2009 @ 11:29 pm |Edit This
မလေးရေ… သူငယ်ချင်းတွေဆီ ဒိပို့စ် နဲ့ လင့် ပို့ပေးချင်လို့.. ၊
Comment by sin dan lar — August 28, 2009 @ 2:14 am |Edit This
အစ်မရေ ကျေးဇူးနော် ကျွန်တော်ကတော့ ဗိုက်ပေါ်တင်ပြီး ကြည့်လေ့ ရှိတယ် သတိထားမှဘဲ အဆီမကျပဲ ဗိုက်မီးလောင် မှာစိုးလို့ 
Comment by amk — August 28, 2009 @ 4:58 am |Edit This
စန္ဒကူး … အိပ်မက်တောင်ပေးနေပြီနော်.. ညီမလေး သတိထားဦး။
Evergreen Phyo … မသုံးရင် စက်ပိတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ် ဖြိုး၊
ဒေါင်းမင်း… မောင်လေးအဖေ ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေ.. အဖေဆုံးရှုံးရတဲ့ခံစားချက်ကို အစ်မနားလည်ပါတယ်ကွယ်။
ရည်မွန်… ဖျားနေတယ်း(
sin dan lar … ဟုတ်၊ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပေါ့စန်ဒါရယ်..
amk … ဒီဗိုက်အဆီကျနည်းက အသစ် ပါလားနော်…
Comment by မလေး — August 28, 2009 @ 8:15 am |Edit This
Comment by ဒီဝိုင်း — August 28, 2009 @ 9:36 am |Edit This
မမေလဲ လက်ပ်တော့ပ်ကို ဆိုဖာခုံပုလေးနဲ့ တင်ပြီး အိပ်ရာဘေးထားအိပ်တာ။ တညလုံး မပိတ်ဘူး။
တခါတလေ စက္ကူဂျပ်ဘူးပေါ်လဲ တင်တတ်သေးတယ်။ စားပွဲပေါ် တခါမှမတင်ဘူး။ အိပ်ရာထဲမှာပဲ အသုံးများလို့လေ။
ဒီစာဖတ်ပြီးမှ လန့်ဖြန့်ပြီးခေါင်းကြီးသွားတယ်။ မမေလုပ်နေတာတွေက မီးလောင်မယ့်အပေါက်ပဲ။
ဒီနေ့ကစပြီး ကွန်ပျူတာပိတ် အိပ်တော့မယ်။ သတိပေးတာ ကျေးဇူး မလေးရေ ..။
Comment by မေဓာဝီ — August 28, 2009 @ 2:48 pm |Edit This
အိမ့်ရေ… အမ အကျင့်က ခုလို ရုံးပိတ်ရက်ဆို အိမ်ကလူနဲ့ သားမနိုးခင် မနက်စောစော NoteBookလေး ဗိုက်ပေါ်တင်(အင်း…အဆီတော့ မကျပါဘူး)… အိပ်ယာပေါ်လှဲရင်း ဘလော့လည်တာကို သိပ်သဘောကျတာ…. ခုတောင် ဒီcommentလေးကို မွှေ့ ယာပေါ်တင်ရေးနေမိတာ… အိမ့်သတိပေးမှ အဲလောက်အန္တရာယ်များမှန်းသိတော့တယ်… နောက်မလုပ်တော့ဘူးနော်… ကျေးဇူးပါညီမရေ…
Comment by တန်ခူး — August 28, 2009 @ 5:15 pm |Edit This
အစ်မရေ taylor swift ရဲ့ teardrops on my guitar နားထောင်ပြီးသွားပြီလား။ကျနော်တော့ အရမ်းခိုက်သွးတာ။ သူတို့ များတော်လိုက်ကြတာ။ ကျနော်ဖြင့်သီချင်း တစ်ပုဒ်မှ key မှန်အောင်မဆိုနိုင်ဘူး။
ဒီတစ်ခါကျောင်းပိတ်ရင်တော့ ဂီတာတီး သင်မလားလို့ ပဲ။ အစ်မ ဦးဝင်းငြိမ်းရဲ့ ရွှေအမြုတေ ထဲကshort story လေးတွေပေါင်းထုတ်ထားတာဖတ်ပြီးပြီလား။ အရမ်းကောင်းတယ်။ကျနော်တော့အားကျလိုက်တာ။
Comment by zwesoelwin — August 28, 2009 @ 8:22 pm |Edit This
ညီမက Notebook ကို အောက်ခံအပျော့တွေပေါ် တင်သုံးရတာ သဘောမကျလို့ မတင်ဖြစ်ပေမယ့် အဲလိုတင်တာ လေဝင်လေထွက်ပေါက်ပိတ်ပြီး အန္တရာယ်ကြီးမှန်း အစ်မရေးမှ သိရပါတယ်။ နောက်ဆို အဲလိုလုပ်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို သတိပေးဦးမှ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မမအိမ့်…း)
Comment by ရွှေပြည်သူ — August 28, 2009 @ 10:19 pm |Edit This
ကြည့်၇တာ မီးလောင်တဲ့ notebook fan ရဲ့ ventilation အပေါက်က notebook ရဲ့ အောက် ကိုထွက်တာဖြစ်မယ် တချို့ laptop တွေ e.g Fujitsu laptop ရဲ့ ventilation က ဘေးကို ထွက်တယ် heat တက်ပြီး မီးလောင်ဖို့ကနည်းပါတယ် သတိဆိုတာ ပိုတယ်တော့မရှိပါဘူး
Comment by amk — August 29, 2009 @ 5:50 am |Edit This
ကျွန်တော်က စားပွဲပေါ်တင်သုံးတာများပါတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေမကတဲ့ညများစွာမှာ လက်ပ်တော့ပေါ် ပါးအပ်ပြီး အိပ်ပျော်သွားတတ်တယ်၊ ဘာကြောင့်များ ……………..
ကြောက်တတ်လာတယ်၊ စေတနာရှေ့ထားသတိပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့်ကျား — August 29, 2009 @ 12:19 pm |Edit This
အစ်မရေ Now Magazine အုပ်တစ်ရာပြည့်မှာကျနော်ရေးတဲ့ fiction တစ်ပုဒ်ပါ လာတယ်။ အလွမ်းကော်ဖီတဲ့။ ကလောင်က Zoe ပါ။ ကျနော်အရမ်းပျော်နေတာ။ နေ့ လည်ကအောင်စာရင်းထွက်တာလည်း အမှတ်ကောင်းလို့ လေ။ ကျနော်က ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အရည်အချင်းမရှိတော့ ဘူးလို့ တောင် ထင်နေပြီ။ ၀မ်းသာလိုက်တာဗျာ။
Comment by zwesoelwin — August 31, 2009 @ 6:11 am |Edit This
ကောင်းလွန်းလို့ အသစ်တင်တိုင်းမေးလ် ပို. ပေးပါနော်
Comment by shwebo — August 31, 2009 @ 6:51 am |Edit This
မြန်မာလို စမ်းပြီးcomment ကြည့်တာပါ…။
Comment by ဏီလင်းညို — August 31, 2009 @ 3:43 pm |Edit This
မင်္ဂလာပါ … လာလည်တယ်နော်
Comment by နှင်းဟေမာ — September 1, 2009 @ 1:21 am |Edit This
Comment by rose of sharon — September 1, 2009 @ 2:07 am |Edit This
Comment by naingmoemoe — September 1, 2009 @ 6:14 am |Edit This
မှတ်စရာတိုးသွားတယ် မလေးရေ။ မေလေးက laptop မရှိသေးပေမယ့် ဝယ်မယ်လို့ စိတ်ကူးထားတော့ ဒီလို သိရတာ ရှောင်ရန်တွေ သိရတော့ ကျေးဇူးပါ မမ။ မမနဲ့သားလေး တို့ မိသားစု ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
Comment by maylay — September 2, 2009 @ 12:25 am |Edit This
zwesoelwin… Congratulations!! အစ်မ ဖတ်ချင်တယ်၊ ဘယ်နားသွားဖတ်ရမလဲ။
ဏီလင်းညို … ရသွားပြီလား၊ အေးအေးမောင်လေး။
အားလုံး.. မလေး ဟိုတစ်လောက ဖျားနေတာ ခုထိ သိပ်နေမကောင်းသေးလို့ လာလည်ကြသူများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဖျားတယ်လို့ သိပ်မပြောရဲဘူး၊ တော်ကြာဒလက်တောရွာကလူတွေ ကြားသွားရင် ကြော်ငြာချက်ထုတ်ဖို့ “ခဏခဏဖျားသူများအဖွဲ့” ထဲ ဆွဲသွင်းနေမှာစိုးလို့ပါ… :D
Comment by မလေး — September 2, 2009 @ 12:02 pm |Edit This
ရောက်တယ် မလေးအိမ့်.. ခြေရာမချန်ဖြစ်တာ ကြာပြီ..
လူက အလုပ်တွေ အရှုပ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းကြီးပတ်လည် ကနေတာ =)
ညီမတို့ဆီမှာတော့ သိပ်ပူလို့ စားပွဲပေါ်တင်ရင်တောင် usb နဲ့ တပ်တဲ့ ပန်ကာပါးပါးလေးတွေ ဝယ်တပ်ထားရတယ်..
Comment by ShwunMi — September 3, 2009 @ 11:58 am |Edit This
သတိရနေတာ။ အွန်လိုင်းတောင်မလာတာကြာပြီ။ နေကောင်းအောင်နေနော်.. အစ်မ
Comment by ချစ်စု — September 4, 2009 @ 12:38 am |Edit This
It is valuable item for us.
Comment by moe thein — September 4, 2009 @ 1:40 am |Edit This
ကျေးဇူးပါပဲ အလင်းစေတမန် ၀ိုင်းတော်သားများအားလုံး ….
ထာဝရ ပျော်ရွှင်နေပီး…ထာဝရ အဆင်ပြေပါစေလား….ထာဝရ တည်တန့်နေနိုင်ပါစေလား…
ကျွန်တော် ဆုမွန်ချွေပါတယ်…..အားလုံးသော အလင်းစေတမန် ၀ိုင်းတော်သားများကို.
Comment by zayyathu.150 — September 7, 2009 @ 2:16 am |Edit This
မေးလ်တွေ ပို့ပေးတာ အရမ်း အရမ်း ပျော်မိပီးတော့ အရမ်း အရမ်း စိတ်ဝင်စားမိသူ တစ်ယောက်မို့ပါ…
ကျွန်တော်လင်းစေ…အလင်းစေတမန် ၀ိုင်းတော်သားများကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါရစေလား…
လက်ဖက်ရည် ကောင်းကောင်း တစ်ခွက်တော့ မန်းလေးရောက် တိုက်ချင်ပါသေးတယ်….
အားလုံးသော အလင်းစေတမန် ၀ိုင်းတော်သားများ ထာဝရ ပျော်ရွှင်နေပီး ထာဝရ အဆင်ပြေ…ထာဝရ တည်တန့်…ထာဝရ ………………..
Comment by zayyathu.150 — September 7, 2009 @ 2:19 am |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:38 PM